Xukuumadda Soomaaliya oo dib u howlgelinaysa Shabakadda Hindisaha Dahfurnaata Dowladda | | Puntland Vision
Xukuumadda Soomaaliya oo dib u howlgelinaysa Shabakadda Hindisaha Dahfurnaata Dowladda
Dib u Howlgalinta Shabakadda Hindisaha Dahfurnaanta Dowladda Ayaa ah mid lagu so bandhigaayo xogta shaqo iyo waxqabadka wasaradaha dowladda,kaasi oo loogu talagalay in bulshada loo soo bandhigo,sida waxqabadka qaab dhismeedka sharciyada Shaqalaha,mashaaricda iyo macluumaadyo kale oo ay bulshada u hayaan hay’adaha dowladda.
Ujeedada barnaamijka oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska Xukuumadda Soomaaliya ayaa la xiriirta islaxisaabtanka shacabka iyo hay’adaha dowladda,si loo abuuro jawi wadashaqeenaad ee dhexmara labada dhinac.
Agaasimaha Guud Wasaradda Warfaafinta C/raxmaan Sheekh yuusuf Al-cadaala Ayaa sharaxaay Ahmiyadda dib u howlgalinta shabakadan Hindisaha Dahfurnaanta Dowladda,iyadoo ay ka qeybgaleeen wasiiro ka tirsan Xukuumadda Soomaaliya iyo madax kaladuwan oo ka kala socoday wasaaradaha iyo qeybaha bulshada.
“Marka koowaad barnaamijka waxaa loo baahday markii la dersay baahiyaha loo qabo in uu jiro farqi u dhexeeya dowladda iyo shacabka,taasi oo ku saabsan in shacabku ay ogaadaan waxyaabaha ay dowladooda u haysto waa taasi barnaamijkan ahmiyadiisa”. Ayuu yiri Agaasime Cadaala.
siihayaha Wasiirka warfaafinta ahna Wasiir kuxigeen Xildhibaan C/raxmaan Iidaan Yoonis ayaa sheegay in lagu so bandhigi doono waxqabadka dowladda.
“Waxaa lagu soo bandhigi doonaan xogaha kaladuwan sida siyaasadda,amniga dhaqaalaah,Miisaaniyadda Sharciyada,si ay halkaasi ugala socdaan macluumaadyada hay’adaha dowladda,Dowladda Soomaaliya ayaa waxaa ay abuuraysaa jawi isla xisaabtan dowladda iyo Shacabka ah’. Ayuu yiri Wasiir Iidaan.
C/llaahi Xaamud Maxamed Wasiiru dowlaha Xafiiska Raiisul Wasaaraha Wasiru dowlaha xaamud ayaa tilmaamay muhiimadda laga leeyahay arrin oo ay hirgelisay Xukuumadda Soomaaliya.
“Hadii shacabka aanay waxba ka ogayn wixii dowladdu ay u qabanaysa,ama ay qabanayso wasaaradda diinta, Beeraha ama Gargaarka iyo wasaaradaha kale, marka hadii qofku aan waxba la socon wax fikrad ah ka ma haysan karo, aduunyada dhan ayaya ka jirtaa”. Ayuu yiri Wasiiru Dowle Xaamud.
Qorshaha ayaa qeyb ka ah dadaalo dowladda Soomaaliya ay ku doonayso in ay ku abuurto jawi wadashqeyneed iyo isla xisaabtan dhexmara hay’adaha Dowladda iyo shacabka ay u adeegayaan.